शालिकराम पुडासैनी आत्मह’त्या प्रकरण : अदालतमा पुगेको फाईलमा के छ ? – PanchKhal Online
Home/समाचार/शालिकराम पुडासैनी आत्मह’त्या प्रकरण : अदालतमा पुगेको फाईलमा के छ ?
शालिकराम पुडासैनी आत्मह’त्या प्रकरण : अदालतमा पुगेको फाईलमा के छ ?
काठमाडौ । शालिकराम पुडासैनी आत्मह’त्या प्रकरणमा न्यूज २४ टेलिभजन प्रस्तोता रवि लामिछाने, पत्रकार युवराज कडेँल, नर्स अस्मिता कार्की विरुद्ध आत्मह’त्या दुरु’त्साहनको मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को सहयोेगमा १० दिन लामो अनुसन्धानपछि चितवन प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धानको फाइल बुझाएको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानको फाइल प्राप्त गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता भनिने रुकु कार्कीविरुद्ध आत्मह’त्या दुरु’त्साहनको मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
लगत्तै वयान सुरु भयो । आइतबार अभियुक्त अस्मिता भनिने रुकु कार्कीको वयान सकिएको छ। न्यायाधीशको अगाडी अस्मितासँग लिखित बयान लिइएको छ । तर, रवि र युवराज कँडेलको वयान बाँकी नै रहेकाले आज सोमबार बिहान १० बजे उपस्थित गराउने गरी तीनैजनालाई प्रहरी हिरासतमा पठाइएको जिल्ला अदालत चितवनका श्रेश्तेदार रुद्रमणि गिरीले बताए । तीनैजनाको वयान सकिएपछि थुनछेक बहस हुनेछ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८५ अनुसार आत्मह’त्या दुरु’त्साहनको मुद्दामा दोषी ठहर भए ५० हजारसम्म जरिवाना, ५ वर्षसम्म जेल वा दुबै सजायको माग गर्दै अभियोगपत्र दर्ता भएको छ ।
के–के भेटियो अनुसन्धानमा ?
प्रहरीले लामिछानेसहित तीनजनालाई ५–५ दिन गरेर दुई पटकमा १० दिनको म्यान थप गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । यसक्रममा पुडासैनीको मोबाइलमा बरामद भएको भिडियो क्लीपमा ‘छेडछाड’ नभएको प्रहरी प्रयोगशालाले रिपोर्टले देखाएको छ ।
पोष्टमार्टम रिपोर्टमापनि उनको आत्माह’त्या नै भन्ने रिपोर्ट आएको छ । अनुसन्धानलाई सघाउन चितवन पुगेका सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दीपक रेग्मीले भने, ‘बरामद भिडियोमा ट्याम्परिङ (छेडछाड) भएको छरछैन भनेर परीक्षणका लागि डिजिटल फरेन्सिक ल्याब (डीएफएल) मा पठाइएको थियो । ल्याबले छैन भन्ने रिपोर्ट दिएको छ ।’
रेग्मीका अनुसार भिडियोबाहेक थप प्रमाण संकलन भएको छ, जसबारे अनुसन्धान रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले मृतक पुडासैनी र आत्मह’त्या दुत्साहनको आरोपमा लागेका ३ जनाको डिजिटल कनेक्सन खोतलेको थियो । लामिछाने, कँडेल र कार्कीको मोबाइलको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर), लोकेशन लगायतका विषय केलाएको थियो । तीनजनाको वयान पनि लिएको छ ।
त्यसक्रममा लामिछाने र कार्कीको वयान बाझिएको अनुसन्धान अधिकृत बताउँछन् । रविले यसअघि आफूले अस्मितालाई नचिनेको दाबी गरेका छन् भने अस्मिताले भने पुरानो चिनजान भएको बताएकी छन् । त्यसैगरी पुडासैनीको आत्मह’त्यालगत्तै लामिछाने र कँडेल कार्यरत संस्था न्यूज २४ टेलिभिजनले पनि अस्मितालाई पटक(पटक सम्पर्क गरेको पनि देखिएको छ ।